Tany misy fanjakana, hono… | NewsMada
Tany misy fanjakana, hono…
Tany misy fanjakana eto, raha ny nambaran’ny mpitondra mpisolo toerana. Tampohin-javatra? Fahefana raha ny marina… Na tahotra sy tsy fahatokisan-tena, ka ny an’ny tena no atao tonga aloha: fampitandremana, fampitahorana aza. Tsy nisy fanjakana, angaha, teto hatramin’izay, raha tsy hiteny afa-tsy izao Repoblika IV izao? Iaraha-mahita, iaraha-miaina… Manao ahoana?
Fanjakana tsy tan-dalàna; amin’izao farany izao aza, tsy afaka faran’ny lohany. Misehoseho sy misekoseko ho mpanaja sy mpanara-dalana, nefa ny tsy fanarahan-dalàna, tsy nananganana ara-potoana ny Fitsarana avo (HCJ), no nahatonga izao fifidianana mialoha ny fotoana izao.
Izay no nitarika ny fametraham-pialana mialoha ny fotoana: ny 7 novambra, raha tokony ho amin’ny 25 novambra.
Tsy nahomby ny fifikiram-pahefana saika hanaovana fitsapankevi-bahoaka hanitsiana ny lalàmpanorenana; eny, na ny hoe miverina amin’ny fitondrana aloha raha tsy voafidy. Fanjakana ahoana izany? Manginy fotsiny ny kolikoly avo lenta, na odian-tsy hita sy tsy tsaroana aza ny nividianana depiote tamin’ny kolikoly 50 tapitrisa Ar avy hampandaniana lalàm-pifidianana, ohatra.
Amin’izany, tsy sahy mitory na afa-baraka izao aza. Mahina amin’ny ratsy vita? Eo koa ny fivarotan-tanindrazana mampikaikaika ny maro amin’ny famelana ny vahiny handroba ny harem-pirenena: an-dranomasina, an-kibon’ny tany… Na ny kiantranoantrano amin’ny tsenambaro-panjakana, ny fakana an-keriny zary fitadiavana… Fanjakana tan-dalàna no misy eto amin’izany?
Amin’izao, ohatra, sahy nilaza ny mpitondra teo aloha iray fa misy manafatra fitaovam-piadiana eto. Inona ny marina? Mila fanadihadiana fa manakorontana. Aiza ity hoe misy fanjakana eto? Raha tsy marina izany, mendrika hampiharana lalàna izay manely tsaho, manakorontana… Sahy sy vonona amin’izany ity hoe fanjakana? Na mamono lolo sy mamono vorona fotsiny…
Ny teo aza, tsy hita izay vita. Nahina ho mpiray tsikombakomba aza, fa mamela ny ratsy hanjaka. “Izay manaiky ny olon-dratsy tsy misy ady atao aminy dia miara-miasa aminy”, hoy ny pasitera Martin Luther King izay. Mila soloina amin’izay?